ဝါးခယ်မ : ၀ါးခယ်မ ဆိပ်ကမ်း စုစည်းမှု ( ၁ )
၀ါးခယ်မ ဆိပ်ကမ်း စုစည်းမှု ( ၁ )
ဆိပ်ကမ်း ( ၁ )
အသက်ကြီးရင်နည်းနည်းတော့ ဝ လာကြသူများပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်း ( ၂ )
ဆိပ်ကမ်း ( ၃ )
ဆိပ်ကမ်း ( ၄ )
ဈေးကြီးကို မေးတင်ထားတဲ့ ဆိပ်ကမ်းပေါ့ ။
ပြုံ ခဲနေအောင်ဆိုက်ကပ်နေတယ်။ အတိတ်တုန်းဆီက
ဆိပ်ကမ်း ( ၅ )
ဆိပ်ကမ်း ( ၆ )
ဟို ဘက်ကမ်းမှာမီးတွေ ထိန်နေပြီ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:07 AM
Labels: ကဗျာ..စာနု...အက်ဆေး, မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ
ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး သူရသက်​​ဆွေ ပြောသော မြန်မာ - ဘင်္ဂ...
မွှေးတို့ရဲ့မြို့ - ငွေယံဦး
အ​မေ့ရဲ့ အတိတ်​မြို့​ဟောင်းတမ်းချင်း - ကျော်စိုး...
Facebook နဲ. Twitter ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်း
Twitter သုံးကြဖို.လိုပြီ - ဘယ်လိုစသုံးကြမလဲ
Bengali ၀င်အစီးခံရသော ရဲကင်းစခန်းမှ တပ်ဖွဲ.၀င်တစ်ဥ...
ဘဂါင်္လီ တို. ၀င်အစီးခံရစဉ် ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ.ခဲ့ရသူ...
ရခိုင် အရေးဗန်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဖျက်ဆီးနေ...